Hal qof ku dhintay iyo afar kale oo ku dhaawacmay iska-hor-imaad daaq iyo deegaan la xiriira oo ka dhacay Karkaar. – Radio Daljir
Qardho, Sept 28 ? Iska-hor-imaad sababay dhimasho hal qof iyo dhaawac afar kaleeto ayaa ka dhacday deegaan miyi ah oo ka tirsan gobolka Karkaar, hoos-yimaadana degmada lagu magacaabo Rako.
Dhimashada iyo dhaawaca, ayaa yimid kaddib markii isku-dhac kooban uu dhex-maray degsiimooyin reer miyi ah kuwaasi oo isku-maandhaafay deegaan iyo dhul-daaqsimeed roobabkii darytu ka hooreen maalmo ka hor.
Dadka reer miyiga ah ee ee isku-dhacaasi uu dhex-maray ayaa iskugu soo guuray dhul-kooban oo laga dagay xareed-dhacmo aan sidaasi u badnayn, taasoo ay ka abuurmeen buuq iyo kala shaxeexaysi xooggani, iyadoo muranka badankiisuna ka dhashay war-bilood.
Mid ka mid ah dadkii ku dhaawacmay iska-hor-imaadkaasia ayaa la sheegayaa xaaladdiisa caafimaad in ay aad u liidato kaddib markii uu soo gaaray dhaawac aad u halis ahi.
Xaaladda deegaankaasi oo ah dhul-miyi ah ayaa la tilmaamayaa wali in xiisadi ka taagan tagan tahay, xalna aan loo helin sidii xurguftaasi loo xakamayn lahaa, iyadoo la xaqiijinayo labada ehelo ee isku-dhacay horay in ay u laahaayeen xarig-jiid iyo xiniftan wax-kala-tabasho.